14 Trekpụrụ na-eweta nsogbu na ụlọ ọrụ | Martech Zone
Ebe ọ bụ na anyị na-arụ ọrụ n'ụlọnga nke anyị na-enyere ụlọ ọrụ teknụzụ ahịa aka, anyị maara nke ọma na ọnwụnwa na mkpagbu nke ụlọ ọrụ na-elekọta mmadụ. Dị ka a boutique gị n'ụlọnga, anyị nwere uru na anyị nwere ike ịbụ nnọọ picky na anyị na ndị ahịa. N'akụkụ nke ọzọ, anyị na-alụ ọgụ n'ihi na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ achọghị ịkwado ụlọ ọrụ ọzọ na ngwakọta ahịa ha.
Anyị enweela ụfọdụ fun poking na aka ahịa na ụlọ ọrụ anyị. Mana n'omume niile, anyị na-ahụ nnukwu oghere na atụmanya ndị ụlọ ọrụ na ndị ahịa anyị na ihe ha nwere ike ịnapụta.
The Nyocha 2015 RSW / US New Year Outlook na-enye ọtụtụ ozi na oghere ndị anyị na-ahụ maka dị ka ụlọ ọrụ. Amalitere m ụlọ ọrụ m n'ihi na enwere m ụfọdụ n'ime nsogbu ndị a mgbe m na-arụ ọrụ na ụlọ ọrụ na ọtụtụ ụlọ ọrụ. Anyị nwekwara ihe ịma aka anyị, mana m kwenyere n'eziokwu na ndị ahịa anyị ga-agba akaebe na anyị mara mma na ihe anyị na-eme, anyị anaghị emezu nkwa, anyị na-enyekwa uru n'ikpeazụ.
Ndị a bụ Trolọ Ọrụ Nchọpụta Nsogbu 14 na nyocha ahụ
Genlọ ọrụ nwere silos nke iche iche / enweghị usoro gafee nyiwe
Ọtụtụ ntụgharị n'ime ndị otu okike na ndị mgbasa ozi
Ụkọ nke ọhụrụ
Na-ajụ Kedu ihe bụ nnukwu nsogbu ịre ahịa gị - umengwụ ụzọ ịmalite mkparịta ụka!
Ha na-emesi data ike na-enweghị n'ezie nghọta it
etikwasị gaa n'usoro ihe omume n'enyeghi ahia ighota it
Chụ na-esote gbaa ihe
Obere nlebara anya n'ahịa research
Ụkọ nke tinye-gbakwunye
Mara mma / na-akpa ọchị vesos na-akpali
Enweghị nghọta metrics ma jiri data kwesiri
Ụkọ nke ahụmahụ na oghere dijitalụ
Enweghị nkọwa na otu technology kwesịrị etinyere
Na-ere teknụzụ ọ bụghị ngwọta
The Nyocha 2015 RSW / US New Year Outlook Emechara ya site na 123 agadi larịị Marketers na 158 Marketing Agency uloru n'oge Disemba, 2014. Ebumnuche nke nnyocha a bụ iji nweta ịkọwa nkọ metụtara marketer na gị n'ụlọnga n'ọnọdụ ka ha na onye ọ bụla na-aga 2015. Isiokwu enyocha enyere nsogbu nsogbu, imefu ihe ndị ị na-atụ anya, mmetụta nke nchịkwa Republican nke andlọ na Senate, uru nke iji ndị na-ahụ maka ọchụchọ iji nyere aka jikwaa ọchụchọ ahụ, na mmegharị iji wulite akwụkwọ akụkọ ụlọ ọrụ, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Tags: gị n'ụlọngana-akpalidataahụmahụnsogbuọhụrụụlọ ọrụ ahịametricsmmemme mmemmeresearchrsw / anyịihe na-egbu maramarasiloTechnologyntụgharịuru